Ikhtiyaariyada Isdiiwaangalinta Dugsiga Sare kadib (PSEO) - Robbinsdale Area Schools
Ikhtiyaariyada Isdiiwaangalinta Dugsiga Sare kadib (PSEO) waa barnaamij u ogolaanaya ardayda fasalada 10aad, 11aad iyo 12aad inay kasbadaan dhibcaha dugsiga sare iyo kuleejka inta ay weli ku jiraan dugsiga sare, iyada oo loo marayo isqorista iyo ku guuleysiga dhameystirka koorsooyinka aan kuliyadaha aheyn ee kuliyadaha xaq u leh ee ka qeyb galaya dugsiga sare. . Inta badan koorsooyinka PSEO waxaa lagu bixiyaa xerada dugsiga sare; koorsooyinka qaarkood waxaa lagu bixiyaa khadka tooska ah. Kuleej kasta ama jaamacad kasta oo kaqeybgalaya waxay dejisaa shuruudaha gelitaanka ee u gaarka ah ee isqorista koorsooyinka PSEO.
Ardayda fasallada kow iyo tobnaad iyo 12aad waxay qaadan karaan koorsooyinka PSEO oo ah mid buuxa ama waqti-dhiman ah; Ardayda fasalka 10aad waxay xaq u leeyihiin inay iska diiwaangeliyaan PSEO si xadidan oo xadidan (eeg qoraalka hoose ee "Macluumaadka Dheeraadka ah ee PSEO"). Ardaydu waa inay buuxiyaan deganaanshaha iyo shuruudaha u-qalmitaanka PSEO isla markaana u hoggaansamaan xadka kaqeybgalka ee ku qeexan Xeerarka Minnesota, qeybta 124D.09. Haddii degmo dugsiyeed ay go'aamiso in ardaygu aanu ku socon dariiqa qalin-jabinta, iyadu / iyadu waxay sii wadi doontaa ka-qaybgalka PSEO xilli-xilli ahaan.
Inta badan ardayda degmadeena waxay ku qaataan casharo PSEO kuliyada farsamada ee Hennepin iyo North Hennepin College. Xulashada kale ee iskuulka waxaa ka mid ah Normandale, Betel, Northwest ee St. Paul, Jaamacadda St. Thomas, Jaamacadda Minnesota iyo kuwa kaloo badan.
Sida Looga Qayb Qaato
Marka la gaaro Maarso 1 ee sannad kasta, ama saddex toddobaad ka hor taariikhda ardaygu isdiiwaangaliyo koorsooyinka sannad dugsiyeedka soo socda (hadba kii hore), dugsiyadu waa inay siiyaan macluumaadka PSEO dhammaan ardayda ku jirta fasallada 8-11 iyo qoysaskooda. Si looga caawiyo degmada qorshaynta, ardaygu waa inuu ku wargaliyaa degmada ugu dambayn May 30 ee sannad kasta ujeedadooda inay iska diiwaangeliyaan koorsooyinka dugsiga sare ka dambeeya inta lagu jiro sanad dugsiyeedka soo socda.
Ma jiraan wax lacag ah oo laga qaadayo ardayda PSEO ee waxbarashada, buugaagta ama khidmadaha ah waxyaabaha looga baahan yahay inay ka qayb galaan koorso; si kastaba ha noqotee, ardaydu waxay la kulmi karaan lacag ujro ah qalab noqda hantidooda marka koorsada ama barnaamijka la dhammeeyo, buugaagta wax lagu barto ee aan dib loogu celin xarunta dugsiga sare sida ku xusan siyaasaddooda, ama kharashka waxbarashada haddii aysan ku wargelin degmada 30-ka Maajo iyo degmadu kama tanaasuli doonto taariikhdan loo baahan yahay.
Lacag ayaa loo heli karaa si looga caawiyo bixinta kharashaadka gaadiidka ardayda uqalma inay kaqeybqaataan koorsooyinka PSEO ee kuleejooyinka jaamacadaha. Macluumaad intaas ka badan oo ku saabsan lacagtaan, ka hel Tilmaamaha Barnaamijka Bixinta Lacag-celinta ee PSEO .
Isqorista koorsada PSEO kama mamnuucayo arday inuu kaqaybqaato waxqabadyada uu kafaalo qaaday dugsiga sare.
Macluumaad Dheeraad ah oo PSEO ah
Degmo dugsiyeedyadu waa inay u oggolaadaan ardayga PSEO inuu si macquul ah u helo dhismaha dugsiga sare, kombiyuutarada iyo / ama agabyada kale ee teknoolojiyadda inta lagu jiro saacadaha caadiga ah ee dugsiga si uu uga qayb galo koorsooyinka PSEO, ha ahaato khadka tooska ah ama xerada.
Sannad kasta, degmooyinku waa inay ku daabacaan boggooda degellada siyaasaddooda miisaamidda darajooyinka, oo ay ku jiraan liiska koorsooyinka ay ardaydu ku kasban karaan buundooyin miisaan leh.
Ardayda fasalka tobnaad waxay marka hore iska qori karaan hal koorso oo ah Xirfada iyo Farsamada Farsamada (CTE) PSEO hadii ay helaan dhibco aqoon aqriska "kulmaya" ama "ka bateen" fasalka 8-aad ee MCA. Haddii ardayda fasalka 10aad ee qaata koorsada CTE PSEO ay kasbadaan ugu yaraan darajada C ee fasalkaas, waxay qaadan karaan koorsooyin dheeraad ah oo dugsiga sare kadib ah. Haddii ardaygu uusan qaadan MCA fasalka 8-aad, qiimeyn kale oo akhris oo ay aqbashay hay'adda diiwaangelisa dugsiga sare kadib ayaa la beddeli karaa. Ardayda naafada ah, waxaa jira ikhtiyaar kale oo lagu muujiyo aqoonta aqrinta.